IForam ye-17 yaseBeijing-Tokyo. Intsebenziswano entsha yedijithali phakathi kweTshayina neJapan
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IForam ye-17 yaseBeijing-Tokyo. Intsebenziswano entsha yedijithali phakathi kweTshayina neJapan
IForam ye-17 yaseBeijing-Tokyo yabanjwa ukusuka nge-25 ukuya kwi-26 ka-Okthobha eBeijing naseTokyo kwi-intanethi kwaye ngaphandle kweintanethi ngaxeshanye.
Ibanjwe liQela lokuPapasha laMazwe ngaMazwe laseChina (CIPG) kunye neTanki yokucinga engenzi nzuzo yaseJapan iGenron NPO, abathathi-nxaxheba abavela kumazwe omabini babelane ngezimvo kwaye babambe iingxoxo ezinzulu ngoqoqosho lwedijithali, ubukrelekrele bokwenziwa (AI), intsebenziswano kwezoqoqosho nezorhwebo, kunye utshintshiselwano ngenkcubeko ngexesha leforum yeentsuku ezimbini.
Kwi-sub-forum ye-17th Forum yaseBeijing-Tokyo ngo-Oktobha 26, iingcali zaseTshayina kunye neJapan zibambe iingxoxo ezicacileyo kunye nezinzulu malunga nethemba lentsebenziswano yamazwe amabini kuluntu lwedijithali kunye ne-AI, kwaye bafikelela kwimvumelwano kwimiba efanelekileyo.
Intsebenziswano yedijithali yaseSino-yaseJapan inamathemba amahle
Xu Zhilong, umhleli oyintloko weSayensi kunye neTekhnoloji yeDaily uthe kwiforamu, "Uphuhliso loqoqosho lwedijithali alukho nje uphuhliso lwetekhnoloji yedijithali okanye iimveliso, kodwa kukwakha inkqubo yendalo yoqoqosho lwedijithali."
UTatsuo Yamasaki, unjingalwazi obalaseleyo weYunivesithi yezeMpilo yeZizwe ngezizwe kunye neNtlalontle uvakalise ithemba lakhe lokuba eli qonga linokuphonononga izisombululo kwimiba echaphazelekayo kuluntu ngekamva ekwabelwana ngalo ngoluntu, njengokunyamekelwa kwabantu abadala kuluntu olugugayo, i-AI evumela imozulu. ukutshintsha ukubeka iliso, ukulandelela i-carbon footprint ngokusebenzisa iteknoloji ye-AI, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla, kunye nokudibanisa amandla emveli kunye nobuchwepheshe obutsha.
UPang Dazhi, usekela mongameli we-NetEase ukholelwa ukuba isizukulwana esiselula saseTshayina naseJapan sazane inkcubeko yomnye nomnye ngeemveliso zedijithali, ezifana noopopayi, imidlalo, umculo kunye neemuvi. "Enyanisweni, ngokusekwe kwilifa lenkcubeko efanayo kunye netekhnoloji ehambelana kakhulu nophuhliso lomdlalo, la mazwe mabini anendawo ebanzi yentsebenziswano kwicandelo lenkcubeko yedijithali kunye noqoqosho lwedijithali."
Iindlela ezintsha kunye neemeko zoqoqosho lwedijithali
UDuan Dawei, usekela mongameli omkhulu kwi-IFLYTEK Co.Ltd. uthe, kukho indawo enkulu yentsebenziswano phakathi kweTshayina neJapan kwinkalo ye-AI. “ITshayina neJapan zijamelene nocelomngeni oluqhelekileyo kwezemfundo, unyango, ukunyamekelwa kwabantu abalupheleyo nakwezinye iindawo. Ke, sinokuxoxa ngendlela yokubonelela ngenkonzo engcono kuluntu ngetekhnoloji ye-AI. ”
UTaro Shimada, i-VP ephezulu ye-Toshiba corporation, uthe ukusetyenziswa kwedatha ye-logistics kusengozini kwiintlekele zendalo. “Zombini i-China kunye neJapan zizimisele ekuphuculeni ukuqina kobonelelo nge-sci-tech. Ukujongana nokothuka kwe-COVID-19, idatha yolungiselelo iveza amathuba kunye nemingeni. Kufikelelwe kwingqiqo eqhelekileyo ekwabelweni kwedatha yezothutho, ukukhuthaza ukusetyenziswa kwedatha yezothutho ukuya kwinqanaba elitsha. "
UJeff Shi, usekela mongameli we-SenseTime, uthe i-AI inokunceda ekusombululeni ingxaki yokuguga ejongene ne-China kunye neJapan, ukujongana nomceli mngeni wokunqongophala kwemveliso. “I-AI inokunceda ekusombululeni ukusilela kwemveliso. Ngeli xesha, i-AI ngokwayo izama ukuphucula imveliso ngokunciphisa ukuthembela kwayo kwidatha nakubantu. ”
"I-Zero carbonisation" ifumana amandla ngoqoqosho lwedijithali
I-AI inceda ukuphuhlisa izinto ezintsha ezifana ne-catalysts entsha, utshilo uJunichi Hasegawa, i-COO ye-Preferred Networks. "I-Photovoltaic, i-hydraulic kunye ne-hydrogen amandla onke adla ngokuxoxwa ngemithombo yamandla, ngelixa zonke zivela kwimithombo yamandla yesibini. Ke ngoko, ukukhutshwa kwekhabhoni akunakuphepheka kwimveliso yala mandla matsha kunye nendlela yokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni ekuveliseni la mandla ngumba obalulekileyo. "
Ukongezelela, uluntu alunakwahlulwa kwiikhompyutha. Indlela yokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kumaziko ayo edatha kunye nokuphuhlisa iikhomputha ezintsha kunye nokusebenza okuphezulu kunye nokukhutshwa okuncinci kukwafanelekile ukucinga ngako.
“Lilonke ukukhutshwa kwekhabhoni yehlabathi kwehle ngeepesenti ezisi-7 ngo-2020 ukusuka kunyaka ophelileyo ngenxa yobhubhani we-COVID-19,” utshilo uLiu Song, usekela mongameli wePingkai Xingchen (Beijing) Technology CoLtd., “Nangona kunjalo, imisebenzi yezoqoqosho iyenzile. ungayeki, isizathu kukukhula ngamandla koqoqosho lwe-Intanethi. ”
U-Liu uthe imisebenzi ye-intanethi inokunciphisa kakhulu ukukhutshwa kwekhabhoni ngelixa iqinisekisa uphuhliso oluqhelekileyo loqoqosho. Sinokufuna indlela entsha yokugcina amandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa ngokusebenzisa, ukuhanjiswa kunye nokugcinwa kwedatha kwixesha elizayo.
Ukhuseleko lwedatha kunye nokhuseleko lugxile
U-Hiromi Yamaoka, ilungu lebhodi ye-Future corporation, uthe ukuphuhlisa i-AI kufuneka kulungiswe iinkxalabo ekuqokeleleni ubumfihlo. Ukusetyenziswa kwe-AI kufuna ukuqokelelwa kwedatha ekumgangatho ophezulu, ebandakanya imiba yolawulo lwedatha, ukhuseleko lwabucala kunye neminye imiba. Kwinkqubo yokuphuhlisa i-AI, iinkxalabo kufuneka ziqwalaselwe. Ukongeza, xa kuziwa ekuhambeni kwedatha ewela umda, amazwe emhlabeni jikelele kufuneka afikelele kwisivumelwano sokuqinisekisa ukhuseleko lokuhamba kwedatha, "watsho.
U-Liu wabelana ngombono kwesi sihloko, esithi imida yokhuseleko lwesizwe kunye nobumfihlo bomntu kufuneka ichazwe ngokucacileyo. I-China inikele ingqalelo kubudlelwane be-dialectical phakathi kophuhliso kunye nokhuseleko lokuhamba kwedatha.